Raysal Wasaaraha Ethiopia oo Beeniyay Hadal Dhawaan Ka Soo Yeedhay Madaxwaynaha Dawlad Deegaanka Somalida Ethiopia | Baligubadlemedia.com
Raysal Wasaaraha Ethiopia oo Beeniyay Hadal Dhawaan Ka Soo Yeedhay Madaxwaynaha Dawlad Deegaanka Somalida Ethiopia
August 3, 2018 - Written by admin
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrin aad loo hadal hayay oo ku saabsan qoondada dadka deegaanka Soomaalida ay ka helayaan shidaalka laga soo saaray deegaankaas.
ONLF: waa naloo gacan dhaafay shidaalkanagii
Maxay Soomaalida Itoobiya uga dhigan tahay ceelasha shidaalka ee deegaankooda?
Maxay qabaan madaxda Soomaalida?
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa horey uga hadlay qoondada uu deegaanka ku leeyahay shidaalka, wuxuuna yiri “Su’aasha ay ka hadlayaan ee ay aad noo weeydiinayaan, waa imisa ayaan leenaya, wixiiba inaga ayaa lehe, imisa aan leenahay waa maxay?” ayuu yiri madaxweynaha oo intaas ku daray “Sharci waxaa jira federaalka oo dhigaya in shidaal haddii uu soo boxo, ama xitaa kheyraad kale in deegaanka uu leeyahay boqolkiiba 40%, federaalkuna wuxuu leeyahay 60%, midda federaalka lafteeda ayaan wax ku leenahay” .
Sheekh Ibraahim Dheere oo ahaa guddoomiyihii jabhaddii hubeysnayd ee heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa “waa in la xaddidaa qoondo la’isla ogyahay , sidoo kale dadka deegaanka waa in laga shaqo galiyaa mashruuca, hadda waa ku yaryihiin”. Wuxuu la hadlayay BBC-da mar uu xarunta soo booqday kal hore.
Sidoo kale afhayeen u hadlay jabhadda ONLF ayaa sheegay in ay ka hortagayaan in kheyraadkii iyo hantidii dadka lasoo saaro iyada oo aanan dadkii lahaa laga talogalinin, sida uu hadalka u dhigay, kana hortagi doonaan wax kasta oo ay ku qaadataba.